I-Bitcoin, iyini, isebenza kanjani nokuthi ungathenga kuphi i-Bitcoins | Izindaba zamagajethi
I-Bitcoin, iyini, isebenza kanjani nokuthi ungathenga kuphi ama-Bitcoins
Kade sizwa ngeBitcoins iminyaka eminingana, hhayi ezindabeni kuphela, kepha nakuchungechunge lwethelevishini. Inkinga ukuthi ezikhathini eziningi, ikakhulukazi ochungechungeni lwethelevishini, Okuyikho ngempela iBitcoins nokuthi yini esingayenza ngayo kusontekile. Bitcoin kuyimali ebonakalayo Ayilawulwa yinoma yimuphi umzimba ogunyaziwe, ayigcinwa emabhange, ayilandeleleki futhi ezikhathini eziningi, ikakhulukazi ezinsukwini zayo zokuqala, ihlotshaniswa nemisebenzi engekho emthethweni ehlobene nokuthengiswa kwezidakamizwa nezikhali (iSilk Road izwakala ujwayelene nathi sonke). Kepha uma sijula ​​kancane siqonde ukuthi iyini ngempela le mali entsha, siyabona ukuthi kungaba, esikhathini esizayo esingekude kakhulu, imali esetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi.
Ngaphezu kwalokho, iBitcoin ibhekane nokwenyuka okumangazayo kwentengo yayo, yingakho isibe yithuba elihle lokutshala imali kulabo abafuna ukuthola inzuzo ebonakalayo emalini yabo. € 5.000, € 10.000, € 200.000, ... kukhona ngisho nabachwepheshe emkhakheni ababikezela ikusasa lapho I-Bitcoin ingabiza ama-euro ayizigidi. Njengoba bebhekene nezimangalo ezinjalo, abantu abaningi bangena emakethe ye-Bitcoin njengabatshalizimali.
Ufuna invest in bitcoin? Sikunikeza i- $ 10 MAHHALA ku-Bitcoin ngokuchofoza lapha
1 Yini i-Bitcoin?
2 Ngubani owadala i-Bitcoin?
3 Ngabe iBitcoin ibiza malini?
4 Ngingayithenga kuphi iBitcoins?
5 Ungayikhipha kanjani iBitcoins
6 Ngubani olawula ama-Bitcoins?
7 Izinzuzo zeBitcoins
8 Okubi kwamaBitcoins
Njengoba ngishilo ngenhla, I-Bitcoin yimali edijithali, ayinayo amanothi noma izinhlamvu zemali zomzimba zokwenza ukuthengiselana. Ama-Bitcoins agcinwa kuzikhwama ezibonakalayo esingakhokha kuzo ngokushesha kwi-inthanethi. Ukushiya eceleni ukusetshenziswa okujwayelekile ebikade kuhlobene ngakho, njengamanje iMicrosoft, ipulatifomu ye-Steam yokudlala, amakhasino aseLas Vegas kanye namaqembu e-NBA basketball amukela le mali yedijithali njengendlela yokukhokha, kepha akubona bodwa kusukela ngenani lamabhizinisi futhi izinkampani ezinkulu eziqala ukuvumela ukusetshenziswa kwale mali ziyanda.
Thola i- $ 10 MAHHALA ngeBitcoin ngokuchofoza lapha
Ngamafuphi singakusho lokho I-Bitcoin yimali edijithali ngokuphelele, esezingeni eliphansi futhi eqhutshwa ngumsebenzisi. Ngenxa yokungabi nalwazi ngale mali entsha engalawulwa yinhlangano yezimali, amanye amazwe aseqalile ukuvimba amawebhusayithi avumela ukusebenza ngale mali, njengeRussia, iVietnam, ne-Indonesia. Kodwa-ke, amanye amazwe afana ne-United States neBrazil asevele enikela ngama-ATM lapho singathenga khona amaBitcoins ngqo ngokuwahlanganisa nesikhwama sethu semali.
Kukhona amanye ama-cryptocurrensets afana ne-Ether, Litecoin noRipple kepha iqiniso ukuthi iBitcoin namuhla ukuphela kwemali eyi-cryptocurrency enokubaluleka nesisindo emhlabeni jikelele.
Ngubani owadala i-Bitcoin?
Yize bungekho ubufakazi bangempela bokuthi ngubani umdali wayo, amathrekhi amaningi wesikweletu uSatoshi Nakamoto ngo-2009, noma ngabe imibono yokuqala yokwenza imali esetshenzisiwe futhi engaziwa yatholakala ngo-1998, ohlwini lwama-imeyili olwenziwe ngu-Wei Dai. USatishi wenze izivivinyo zokuqala zokusebenza komqondo weBitcoin ohlwini lwamakheli eyunivesithi yakhe, yize ngemuva nje kokushiya iphrojekthi, eshiya ulwandle lokungabaza futhi edala ukungabi nokuqonda ngomthombo ovulekile lapho iBitcoin isekelwe khona nokusetshenziswa kwangempela.
Ngo-2016, wase-Australia UCraig Wright, uthi ungumsunguli wemali edijithali eceleni kukaDave Kleiman (wadlula emhlabeni ngo-2013) esho ukuthi igama likaSatoshi Nakamoto lalingelona iqiniso futhi lidalwe yibo bobabili ukuze bacashe ngokungaziwa. UCraig wethule uchungechunge lokhiye abazimele abahlobene nezinhlamvu zemali zokuqala ezidalwe nguNakamoto, kepha kubonakala sengathi imininingwane ayivezile ukufakazela ukuthi ungumdali ibinganele futhi okwamanje igama lomdali wamaBitcoins lisemoyeni .
Ngabe iBitcoin ibiza malini?
Ngonyaka odlule, intengo yeBitcoin inyuke kakhulu ngama-500%, futhi ngesikhathi sokubhala le ndatshana, intengo yeBitcoin icishe ibe ngama- $ 2.300. Ngaphandle kokuqhamuka kwemali ekhona eminyakeni yamuva, abaningi basenokungabaza uma kukhulunywa ngokutshala imali kule mali yedijithali, ukukwenza ikhathalogu njengomphumela we-bubble ozoqhuma kungekudala, kuthathe imali yabo bonke abasebenzisi abatshale isikhathi nemali kule mali.
Ngabe ufuna ukutshala imali ku-Bitcoin?
Chofoza LAPHA ukuthenga iBitcoin
Iphuzu elilodwa esivuna lona ukuthi akuxhomekile kunoma yimuphi umzimba owulawulayo futhi ongawulawula, Ngabasebenzisi nabavukuzi kuphela, kanye nenani lemisebenzi eyenziwa usuku nosuku, okungaba nomthelela ekukhuphukeni noma ekwehleni kwentengo yabo. Izicelo ezahlukahlukene noma amakhasi wewebhu asivumela ukuthi sithenge futhi sithengise amaBitcoins asinikeza isilinganiso ngesikhathi esifanele esifuna ukuthengiselana ngaso ukuze sazi ngaso sonke isikhathi inani lamaBitcoins esizowathola. Uma ufuna ukuthenga i-Bitcoins, isincomo sethu ukuthi usebenzise ipulatifomu eqinile nephephile njengeCoinbase. Chofoza lapha ukuvula i-akhawunti ngeCoinbase bese uthenga amaBitcoins akho okuqala.
Ngingayithenga kuphi iBitcoins?
Yize inani lamaBitcoins lingahluka kakhulu ngaphezu konyaka, ngaphezulu nangaphezulu abasebenzisi abanentshisekelo yokutshala imali kule cryptocurrency. Njengamanje ku-intanethi singathola inani elikhulu lamakhasi ewebhu asivumela ukuthi sitshale imali kumaBitcoins. Kepha kukho konke esingakuthola, iningi labo lifuna nje ukugcina imali yethu ngaphandle kokunikela ngokutholayo, siqokomisa uCoinbase, ongomunye wabokuqala ukubheja ngale mali engeyona eyodwa futhi engaziwa cishe kusukela ekuqaleni.
Ukuze ukwazi thenga ama-Bitcoins nge-Coinbase kufanele landa izinhlelo zokusebenza ezifanele zohlelo ngalunye lokusebenza: iOS noma i-Android. Lapho nje sesibhalisile futhi siqedela izinyathelo ezimbalwa ezilula zokuqinisekisa, sigcwalisa imininingwane ye-akhawunti yethu yasebhange futhi singaqala ukuthenga ama-Bitcoins, ama-Bitcoins azogcinwa esikhwameni semali esisinikezwa yile nsizakalo, lapho singakhokhela abanye abasebenzisi kulokhu hlela imali noma umane uzigcine kuze kube yilapho intengo yazo yemakethe iphakeme kunalena yamanje.
Ungacabangi kabili bese uthola u- $ 10 MAHHALA ku-Bitcoin ngokuchofoza lapha
Kuhlelo olufanayo singathola ngokushesha inani leBitcoin ngesikhathi sokuthenga noma ukuthengisa, ukuze singabi nesidingo sokuthinta amanye amakhasi wewebhu ngaphambi kokwenza inqubo. Njengomthetho ojwayelekile, inani le-Bitcoin likhonjiswa kumadola, ngakho-ke kuyalulekwa ukuthenga le mali ngamadola hhayi ngama-euro, ngaphandle kwalokho sifuna ukulahlekelwa yimali ngezinguquko ezenziwe yibhange ukwenza ukuthengiselana.
Ungayikhipha kanjani iBitcoins
Ukuze uqale ukubeka ikhanda lakho emhlabeni wamaBitcoins udinga kuqala kunakho konke uxhumano lwe-inthanethi, ikhompyutha enamandla nesoftware ethile. Emakethe singathola imfoloko ehlukene yohlelo lokusebenza lomthombo ovulekile olusetshenziselwa ukuthola amaBitcoins, konke kuya ngokuthi yiziphi ezifanelana nezidingo zakho. Inqubo yokwenza izimayini zeBitcoins ilula, ngoba ithimba lakho liphethe, kanye nezinkulungwane zamanye amakhompyutha, ukucubungula ukuthengiselana okwenziwa emakethe kuthi ngokuqoqayo kuqoqwe iBitcoins. Ngokusobala amaqembu owasebenzisayo, amaBitcoins amaningi ongawathola, yize kungeyona yonke into enhle njengoba ibukeka.
Lapho kunokuncintisana okuningi, amathuba okuthi iqembu lakho lisetshenziselwe ukwenza ukuthengiselana kwehle yingakho izinga lenzuzo liyancipha. Akekho ongalawula uhlelo ukukhuphula imali engenayo yamaBitcoins, okuwukuphela kwento engenziwa ukudala amapulazi anenqwaba yamakhompyutha axhunywe kwinethiwekhi, nawo lawo kufaka izindleko ezibalulekile zokukhanya, kungabalwa izindleko zemishini, okumele ibe namandla amakhulu.
Ijubane ezakhiwe ngalo liyancipha njengoba kukhishwa iBitcoins, kuze kufinyelele isibalo sezigidi ezingama-21, okuyisikhathi lapho kungasakwazi ukukhiqizwa imali yalolu hlobo ngogesi. Kepha ukufinyelela kuleyo mali kusenesikhathi eside okusamele kwenziwe.
Enye inketho yokumba ama-bitcoins ngendlela elula kakhulu ukuqasha uhlelo lwe Izimayini ze-Bitcoins cloud.
Ngubani olawula ama-Bitcoins?
Inkinga emelelwa yiBitcoins yamazwe namabhange amakhulu ukuthi asikho isikhungo esiphethe ukulawula konke okuphathelene nale mali, okusobala ukuthi akubenzi bahlekise, ikakhulukazi okwesikhathi kule ngxenye lapho iBitcoin iqala ukuba khona imali ejwayelekile, yize kusasele iminyaka eminingi ngaphambi kokuthi kube enye indlela yangempela.
ICoinbase, iBlockchain.info neBitStamp baphethe ngokunikela ngengqalasizinda yeBitcoin, zingama-node asebenzela inzuzo, ngakho-ke ahlala ezenzela inzuzo yawo, noma ngubani obanikeza imali eningi, kepha akubona ababeke ekusakazeni, lowo msebenzi uwela kubavukuzi, abantu ababonga isoftware ethile namandla wekhompyutha / ama-computer akho angaba ngezimayini futhi ahole ama-Bitcoins.
UkuphephaNjengoba abasebenzisi benokulawula okuphelele kukho konke ukuthengiselana kwabo, akekho ongakhokhisa i-akhawunti njengamakhadi wesikweletu noma ama-akhawunti wokuhlola.
Okusobala. Yonke imininingwane ephathelene neBitcoins itholakala esidlangalaleni ngama-blockchains, irejista lapho kutholakala yonke imininingwane ephathelene nale mali, irejista engenakuguqulwa noma isetshenziswe.
Amakhomishini awekho. Amabhange aphila ngamakhomishini asikhokhisa wona ngaphezu kokudlala ngemali yethu. Izinkokhelo esizenzayo ngeBitcoins, ezimweni eziningi zikhululekile ngokuphelele ngoba akekho umxhumanisi wokukwenza, yize kwesinye isikhathi, kuya ngohlobo lwensizakalo esifuna ukuyikhokha, enye ikhomishini ingafakwa, kepha ezimweni ezithile.
Ngokushesha. Ngenxa yamaBitcoins singathumela futhi samukele imali cishe ngaso leso sikhathi kusuka noma kuphi emhlabeni.
Ngokusobala hhayi kuphela umhlaba, futhi izinhlangano zezezimali ezingaphansi, ezincoma ukwenziwa kutholakale kwale mali, ikakhulukazi ngoba ayinandlela yokuyifinyelela nokuyilawula.
Ukuqina. Selokhu yazalwa, amaBitcoins afinyelele ezibalweni ezidlula inkulungwane yamadola iyunithi ngayinye, futhi ezinsukwini kamuva zinenani lamakhulu ambalwa amadola. Konke kuncike ekusebenzeni nevolumu yamaBitcoins ahamba ngaleso sikhathi.
Ukubaluleka. Impela uma ubuza umuntu owaziwa ngama-bitcoins futhi ongekho kakhulu kwezobuchwepheshe, bazokutshela uma ukhuluma ngesiphuzo samandla noma into efanayo. Yize amabhizinisi amaningi nezinkampani ezinkulu seziqala ukuxhasa le mali, kusese nokude okumele kwenziwe ngaphambi kokuthi ibe yimali ejwayelekile yosuku nosuku.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » I-Bitcoin, iyini, isebenza kanjani nokuthi ungathenga kuphi ama-Bitcoins
Ama-Cryptocurrensets asuselwa ohlelweni lwe- "peer to peer" (kusuka kumsebenzisi kuye kumsebenzisi) oluye lwasivumela ukuthi sihlukane nezinkinga zezindlela zangaphambili zokukhokha: isidingo somuntu wesithathu.
Ngaphambi kokusungulwa kwama-cryptocurrensets, lapho ufuna ukukhokha online, bekufanele usebenzise amapulatifomu afana namaBhange, i-Paypal, i-Neteller, ... njll ukwenza izinkokhelo.
Nge-cryptocurrency Bitcoin lokhu sekuguqukile ngoba akudingeki ukuthi kube nomzimba ngemuva kwale mali yamahhala, ekubeni inethiwekhi uqobo eyenziwe ngabasebenzisi (izinkulungwane zamakhompyutha emhlabeni jikelele) abenza isiqiniseko sokwenza ukuqapha, ukulawula nokubhalisa ukuthengiselana.
Satoshi Nakamoto kusho
Mnu. Craig Wright, akusiye uSatoshi lo. Le ndoda yayingumamukeli wephutha lwenye yamadrayivu alukhuni engangiyisebenzisa.
Ukuthengiselana kukaFinney, kungukuthengiselana engikwenze nge-pc yami, iCore 2 Duo ene-2gb yenqama ne-hard disk engu-80, lapho ngifaka iBitcoin 9-sheet Pdf, kanye nokuqhathaniswa komthetho kaMoore, kwi-laptop yami.
I-Transaction yenziwa nge-pc yami yaya kwi-laptop ye-Acer Aspire, kwathi i-hard drive engu-2,5 yale laptop yathunyelwa kuyo, ngenxa yephutha. Ubudlelwano bami nale ndoda abuzange bube ngaphezu kwezentengiselwano, angimazi, futhi angazi ukuthi uhloseni, noma inhloso yalo lonke lolu daba.
Ukuthengiselana kukaFinney kwakuyisivivinyo sokuqala engisenzile, nge-ip nange-port 8333 ephumelele. Mina noFinney sifihla ukulethwa kwefayela nomsebenzi wokuhlela umhlangano.
Leli elinye lamaqiniso nezimfihlakalo engikudalulele lona namuhla.
Namuhla, ngizohlala ngingaziwa, kepha kulokhu ngokungafani neminyaka yakamuva, sengikulungele ukukhuluma.
Phendula uSatoshi Nakamoto
UJaime Noble kusho
OKUBALULEKILE: eSpain, sebenzisa i-LiviaCoins.com ukuthenga noma ukuthengisa ama-bitcoins. Kuyashesha futhi kulula
Phendula uJaime Noble
IMicrosoft ifuna ukuthi i-3,5mm jack ibuyele kuma-Smartphones
Ngabe umehluko we-ID yobuso be-Apple phakathi kwamawele amawele? Mhlawumbe hhayi